မီးဖိုချောင် Faucet ကို Matt Matt ကဆွဲထုတ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ / မီးဖိုချောင် faucets / Faucets Down ဆွဲ / WOWOW Matte Black မှဆွဲယူသောမီးဖိုချောင် Faucet
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော 4.805ထဲကအပေါ်အခြေခံပြီး 20 ဖောက်သည် ratings
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးနှင့်အတူ Matte အနက်ရောင်မီးဖိုချောင် faucet
WOWOW သည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ မီးဖိုချောင်တွင်ပါ ၀ င်သည့် faucets များကိုအကောင်းဆုံးအနက်ရောင်ဆွဲထုတ်ရာတွင်အတွေ့အကြုံရှိသည်။ WOWOW ၏မီးဖိုချောင် faucet ၏ဆွဲအားကျမှုနှင့်ဒီဇိုင်းတွင်သံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ဤအတွေ့အကြုံ၏ရလဒ်အနေဖြင့်သင်သည်သင်၏မီးဖိုချောင်တွင်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးပြည့် faucet ကိုရရှိရန်သေချာသည်၊ အမြင့်ဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးနောက်ဆုံးတွင်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းနှင့်အတူ။ ဤအကြောင်းကြောင့်, သင်မီးဖိုချောင်ကိုဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ဒီဇိုင်းသောအခါ WOWOW ၏ဒီမြင့်မားသော arc mate အနက်ရောင်ဆွဲမီးဖိုချောင် faucet အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
WOWOW မီးဖိုချောင် Faucets 2310700B ကိုဆွဲချ
သင်၏အချိန်အများစုကိုသင်သုံးသောနေရာတွင်မီးဖိုချောင်သည်သင့်အိမ်ရှိနေရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ မီးဖိုချောင်သည်သင်၏အစားအစာများကိုပြင်ဆင်သည့်နေရာသာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်လူများစွာသည်မီးဖိုချောင်တစ်ဝိုက်တွင်သူတို့၏ဘဝကိုအဓိကထားကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်အစားအစာလုပ်သည့်နေရာဘေးတွင်diningရာမထမင်းစားစားပွဲပါသောစားဖိုမှူးမီးဖိုချောင်တစ်ခုအကြောင်းစဉ်းစားကြည့်ပါ။ မည်သည့်မီးဖိုချောင်အမျိုးအစားကိုမဆိုသင်ဒီဇိုင်းနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုသည်၎င်း၏အရေးကြီးဆုံးကဏ္ aspects နှစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏အိပ်မက်မီးဖိုချောင်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အခါအလွန်အထင်ကြီးစေလိုသည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်မီးဖိုချောင် faucet ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ မီးဖိုချောင် faucets သေးငယ်ပေမယ့်သူတို့ကမည်သည့်မီးဖိုချောင်၏သဘာဝဗဟိုချက်အချက်များဖြစ်ကြသည်။ လူတွေရဲ့အမြင်အာရုံဟာမီးဖိုချောင် faucet ကိုသဘာဝကျကျဆွဲဆောင်နေပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သင်သည် WOWOW ၏မြင့်မားသော arc matte အနက်ရောင်မီးဖိုချောင် faucet ကိုဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မည်။ WOWOW အနက်ရောင်ဆွဲချမီးဖိုချောင် faucet သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းနှင့်အရည်အသွေးကောင်းသည့်မီးဖိုချောင် faucet ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိသောစျေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချပေးသည်။ ထို့ကြောင့်မီးဖိုချောင်ပါသည့်ဤမီးဖိုချောင်သုံးရေကန်သည်သင်စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအချိုးအစားကိုပေးစွမ်းသည်။
စတိုင်ကျလှပသောဒီဇိုင်းသည်မီးဖိုချောင် faucet ကိုအနက်ရောင်ဖြင့်ဆွဲထုတ်သည်
WOWOW ၏မြင့်မားသော arc matte အနက်ရောင်ဆွဲအားမီးဖိုချောင် faucet ကိုခေတ်မီစတိုင်အသေးစိတ်များဖြင့်အသစ်ပြန်လည်ထားသောဂန္တ ၀ င်မှုတ်သွင်းဒီဇိုင်းဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ဒီမီးဖိုချောင် faucet နီးပါးမည်သည့်မီးဖိုချောင်မှကြော့ရှင်းတဲ့ထိ add add ပါလိမ့်မယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့သင်သည်သင်၏မီးဖိုချောင် faucet ကောင်းစွာရွေးချယ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ကျန်မီးဖိုချောင်၏ဒီဇိုင်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောညီညွတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမည့်နည်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ မီးဖိုချောင်ပါ ၀ င်သည့်မီးဖိုချောင်တပ်ဆင်ထားသောဤအနက်ရောင်ဆွဲအားကအားသာချက်မှာခေတ်မီမီးဖိုချောင်ဒီဇိုင်းများနှင့်ရိုးရာဒီဇိုင်းများနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို WOWOW ၏အနက်ရောင်ဆွဲချမီးဖိုချောင် faucet သည်မည်သည့်မီးဖိုချောင်ကိုမဆိုအံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသောထိတွေ့မှုကိုအာမခံပေးလိမ့်မည်။ ဒီ gooseneck matte အနက်ရောင်မီးဖိုချောင် faucet သင်အနည်းငယ်မျှသာဒီဇိုင်းကိုပူဇော်မသာ။ အဆိုပါရိုးရှင်းဒီဒီဇိုင်းမီးဖိုချောင် faucet ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၎င်းသည်ထူးခြားသောအရောင်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များပေါင်းစပ်ထားသောအံ့သြဖွယ်ဒီဇိုင်းဖော်ပြချက်တစ်ခုကိုလည်းပေးသည်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် WOWOW မှာမီးဖိုချောင် faucet ကိုအနက်ရောင်ဆွဲချထားတဲ့အနုပညာလက်ရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏မီးဖိုချောင်တွင်ဤဖြိုဖျက်သောမီးဖိုချောင် faucet ကိုအသုံးပြုလိုက်သောအခါ your ည့်သည်များ၏အံ့သြဖွယ်ရာတုံ့ပြန်မှုများဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သေချာပါသည်
ဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ထို့အပြင်အရေးကြီးသောမီးဖိုချောင် faucet ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသည်။ သင်သည်သင်၏မီးဖိုချောင်တွင်ရှိနေစဉ် aDesign သည်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်အရေးကြီးသည်မှာမီးဖိုချောင် faucet ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏နေ့စဉ်မီးဖိုချောင်တွင်ရှိနေစဉ်၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်အချက်အပြုတ်ဖန်တီးမှုများကိုပြင်ဆင်သောအခါ၊ ၎င်းကိုသင့်အားအစားအစာပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်နောက်မှသန့်ရှင်းခြင်းပြုလုပ်ရန်သင်အားကူညီချင်သည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့်မီးဖိုချောင်တွင်ပါ ၀ င်သည့်မီးဖိုချောင်သုံးမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများအားမီးဖိုချောင်လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ဆန္ဒများကိုထောက်ပံ့ပေးသင့်သည်။ WOWOW ၏မြင့်မားသော arc matte အနက်ရောင်ဆွဲအားမီးဖိုချောင် faucet သည်သင့်အားအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အချည်းနှီးဖြစ်သောမီးဖိုချောင်သုံးမီးဖိုချောင်သုံးမီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းသည်စျေးကွက်ရှိမီးဖိုချောင် faucets များထဲမှအများဆုံးလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူသည်။ အနက်ရောင်မီးဖိုချောင် faucet ၏ဆွဲအားနိမ့်ပိုင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ပထမ ဦး စွာသင်၏မီးဖိုချောင်ထဲရှိအစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်ကိုယ်တိုင်အလွယ်တကူဖြုတ်တပ်နိုင်သောမှုတ်ခေါင်းကိုအလွယ်တကူဆွဲထုတ်နိုင်သည်။ ဆွဲယူသောခေါင်းကိုအသုံးပြုပြီးနောက်၎င်းသည်၎င်း၏မူလအနေအထားသို့ချောချောမွေ့မွေ့ပြန်လည်ရောက်ရှိလိမ့်မည်။ သင်၏မီးဖိုချောင်လုပ်ငန်းအရပျော့ပျောင်းသောအပူနှင့်ရေမှုန်ရေမွှားအကြားအဆင်ပြေစွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ မီးဖိုချောင် faucet မှအနက်ရောင်ဆွဲချထားသည့်အနက်ရောင်အဖြူရောင် adapter သည်နောက်ဆုံးတွင်သင်လိုအပ်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကိုပေးလိမ့်မည်။
သံမဏိ matte အနက်ရောင်မီးဖိုချောင် faucet ချဆွဲ
WOWOW ၏အနက်ရောင်ဆွဲအားမီးဖိုချောင် faucet ကိုသံမဏိနှင့်အခြားအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ မီးဖိုချောင်တွင်တပ်ဆင်ထားသောဤ faucet သည်ခြစ်ရာများကိုခံနိုင်ရုံသာမကသံချေးတက်ပြီးအစွန်းအထင်းလည်းခံနိုင်သည်။ WOWOW အနက်ရောင်မီးဖိုချောင် faucet ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ လွယ်ကူသောပွတ်ဆွဲခြင်းသည်ဆီလီကွန်ခေါင်းပေါ်၌တည်ဆောက်ထားသောဓာတ်သတ္တုအကြွင်းအကျန်များနှင့်မြေဖြူများကိုသုံးပါလိမ့်မည်။ မီးဖိုချောင် faucet သူ့ဟာသူဆေးကြောရန်လွယ်ကူသည်အဖြစ်အစွန်းအထင်းကချိတ်ဆက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သင်၏ Matte အနက်ရောင်မီးဖိုချောင်ပိုက်ကိုမကြာခဏသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်းသည်တာရှည်ခံစေနိုင်သည်။ မြင့်မားသော arc matte အနက်ရောင်မီးဖိုချောင် faucet ၏ဆွဲယူတပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတပ်ဆင်ညွှန်ကြားချက်နှင့်တကွကြွလာ။ ၎င်းသည်ရှေ့သို့လှည့်ခြင်း ၉၀ ဒီဂရီကိုစီမံထားသည့်အတွက်၎င်းအားမွေ့လျော်သောအနက်ရောင်မီးဖိုချောင် faucet ကိုပိုမိုတင်းကျပ်သောနေရာများတွင်လိုအပ်သည့်တန်ပြန်ရှင်းလင်းခြင်းမလိုဘဲတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် WOWOW ၏ဒီဇိုင်နာများသည်မီးဖိုချောင်ပါ ၀ င်သည့်မီးဖိုချောင်သုံး faucet ကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အရာအားလုံးကိုစဉ်းစားမိကြသည်။ ထို့ကြောင့် WOWOW သည်မီးဖိုချောင် faucet ကိုအောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းသုံးနှစ်အာမခံပေးရန်ကမ်းလှမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုသေချာစွာသိရှိပြီးသင်၏အမြင့်ဆုံးသက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်အမြင့်ဆုံးအထိလုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုအာမခံပါသည်။ မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်မဆိုဤမီးဖိုချောင်သုံးရေကန်သည်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှသင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါကကုန်ပစ္စည်းကိုသင့်အတွက်မည်သည့်အပိုကုန်ကျမှုမှမပေးဘဲအစားထိုးမည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ မီးပွားအနက်ရောင်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းသည်သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းမဖြစ်နိုင်ပါကရက်ပေါင်း ၉၀ အခမဲ့ပြန်ပို့ခြင်းမူဝါဒကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ မင်းတို့တွေ့တဲ့အတိုင်းငါတို့မီးဖိုချောင် faucet ကိုဖြုတ်ချလိုက်တဲ့ငါတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်အနက်ရောင်ကိုယုံကြည်တယ်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်သင်သည် ၁၀၀% ကျေနပ်မှုရှိလိမ့်မည်ဟုသာမျှော်လင့်နိုင်သည်။
WOWOW ၏မြင့်မားသော arc mate အနက်ရောင်သည်မီးဖိုချောင် faucet ကိုအတိုချုပ်ထဲမှာဆွဲချသည်။
မည်သည့်မီးဖိုချောင်မှ wow-factor ကိုပေးသည်
ဒီမြင့်မားတဲ့ arc အိမ်ထောင်ဖက်အနက်ရောင်အပေါ်3နှစ်အာမခံမီးဖိုချောင် faucet
SKU: 2310700B Categories: မီးဖိုချောင် faucets, Faucets Down ဆွဲ Tags: High Arc, မက်တီက Black, ဆွဲချပါ
2.6 ကီလိုဂရမ် = 5.7320 ပေါ = 91.7123 အောင်စ
21.65 x ကို 11.02 x ကို 2.76 လက်မ
ဆွဲချ sprayer နှင့်အတူမီးဖိုချောင် faucet / မီးဖိုချောင်စုပ် faucet
Single-Hole &3တွင်း; ကုန်းပတ် - တောင်
အမြင့် Arc / Gooseneck
1 လက်မကုန်းပတ် Plate Cover နှင့်အတူ 3-Hole သို့မဟုတ် 8-Hole
Modes သုံးမျိုး: Stream / Spray / Pause
ရောနှောထိပုတ်ပါ / သုံးရေထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို
ဒေါ်2020 / 10 / 7
ကျွန်မခင်ပွန်းကပိုက်ကန်ထရိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးကျွန်မတို့အိမ်မှာရေပိုက်တွေအများကြီးအရမ်းရှုပ်ထွေးတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်အသစ်ကိုတည်ဆောက်စဉ်ကျွန်ုပ်တို့တစ်နှစ်တာနေထိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ RV အတွက်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တွင်းတိုးတက်မှုစတိုးဆိုင်တွင်လှပသောရွှေရောင် faucet အတွက် $ 200 + မပေးလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်မုန်းပြီးအဲဒါအမှိုက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါပြန်လာနိုင်မယ်ဆိုတာသိလိုက်ရင်ကျပန်းအခွင့်အလမ်းတစ်ခုယူပြီးကျွန်မရဲ့ခင်ပွန်းရဲ့“ စျေးပေါတဲ့ faucets” နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတိပေးချက်တွေကို ၀ ယ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးကြိုက်တယ်။ အရွယ်အစားနှင့်စကေးသည် RV အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မှုတ်ဆေးထည့်ထားသောအလေးချိန်၏အလေးချိန်ကိုအလွန်နှစ်သက်သည်။ ကျွန်ုပ်ခင်ပွန်းက၎င်းကိုပြissuesနာမရှိဘဲထည့်သွင်းခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး စလုံးသည်ရေမှုန်ရေမွှား၏အရည်အသွေး၊ toggle ခလုတ်များကိုနှစ်သက်မိသည်။ ၎င်းသည်မှုန်ရေမွှားမှစီးဆင်းသွားသည့်အပြင်ရေမှုန်ရေမွှားခေါင်းပေါ်မှစီးဆင်းမှုရပ်တန့်ခြင်းခလုတ် (အလွန်အဆင်ပြေသည်)၊ ၎င်းကိုဖွင့် / ပိတ်သောလက်ကိုင်နှင့်အလုပ်ကြိုးစားသော Matte အနက်ရောင်ပြီးအောင်လုပ်သည်။ ရုံကချစ်ကြပြီးအလွန်ကြီးစွာသောတန်ဖိုးကိုခဲ့ !! အကြံပြုလိုပါတယ်
ကို C *** တစ်ဦး2020 / 10 / 10
ငါတို့အသုံးအဆောင်ခန်းထဲမှာယိုနေသောငန်းလည်ပင်းဆေးဆေးကိုအစားထိုးရန်ဤအရာကိုကျွန်ုပ်မှာလိုက်သည်။ နင့်ကိုဆွဲချထားတဲ့နင့်စ်တစ်ခုလိုချင်ပေမယ့်စတိုးဆိုင်ကြီးတွေမှာကြည့်နေတဲ့ဒေါ်လာ ၁၀၀ ကျော်လောက်ကိုမသုံးချင်ဘူး။ ဒီတစ်ခုကိုတွေ့ပြီးစမ်းကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
တပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ငါရှိသည်သော / ဖွင့်အဆို့ရှင်၏ငါကွဲပြားခြားနားသောတ ဦး တည်းလိုအပ်မှလွဲ။ အားလုံး connectors ပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည်။ ကျန်တဲ့အရာအားလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးပြီး install လုပ်ဖို့အရမ်းလွယ်ကူတယ်။ ညွှန်ကြားချက်များအမှတ်အသားအပေါ်ရှိကြ၏။ ငါတခြားသူတွေပုံမှန်နေမှနောက်ပြန်ဖြစ်ခြင်းပူ / အအေးနှင့်အတူပြproblemနာတစ်ခုရှိကြောင်းဖတ်ပါ။ သင်၏ပူ / ရေအေးလိုင်းများကိုဆန့်ကျင်ဘက်သာချိတ်ဆက်ထားပြီးဘေးဘက်မှကြည့်ပါကသင်မမြင်နိုင်သဖြင့်ဖွင့် / ပိတ်ထိန်းချုပ်မှုရှိအရေးအသားကိုလျစ်လျူရှုပါ။ ထိုအခါသင်သည်ပုံမှန်အဖြစ်ထိန်းချုပ်မှုရပါလိမ့်မယ်။
စမ်းချောင်းသည်ကြီးလှ၏။ ရေမှုန်ရေမွှားကိုချစ်မြတ်နိုးပြီး nozzle ကိုဆွဲချလိုက်ပါ။ အိုးကြီးများနှင့်ဟင်းချိုအိုးကြီးများကိုအလွယ်တကူဆေးကြောသန့်စင်နိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးမားသောနှင့်နက်ရှိုင်းသော utility ကိုစုပ်သုတ်ခြင်းအဘို့ကြီးသော။ ယေဘုယျအားငါဒီ faucet နှင့်အတူအလွန်ကျေနပ်မိပါတယ်။ ၅ နှစ်အာမခံသည်အလွန်ကောင်းပါသည်။ ဒီထုတ်ကုန်ကိုကျွန်တော်သိတဲ့လူတွေကိုအကြံပေးချင်ပါတယ် ဂရိတ်ထုတ်ကုန်။
ကို C *** တစ်ဦး2020 / 10 / 11
ငါတို့ရဲ့မီးဖိုချောင်ပြန်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုအတွက် ၀ ယ်ယူလိုက်တယ်။ သံမဏိကိုယ်ထည်နဲ့ထွက်ကြည့်ချင်တယ်၊ ငါတို့ရဲ့ဗီရိုတွေကအရောင်ဖျော့ဖျော့ espresso အသေးစိတ်ပါ။ ဒါကြောင့်ငါတို့မီးဖိုချောင်အတွက်အလွန်ကောင်းတဲ့အသံထွက်ခဲ့သည်။ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်, ငါ့ခင်ပွန်း 45 ခန့်မိနစ်အတွင်း install လုပ်။ ဖြစ်ကောင်းအချိန်အများကြီးလျော့နည်းပေမယ့်ငါတို့အဟောင်းနစ်မြုပ်ခြင်းနှင့်ထွက်ရရန်နာကျင်မှုရှိရာ faucet ယူကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဘယ်အချိန်မှာကောင်းတဲ့အင်အားရှိတယ် ရေထွက်ရိုက်ကူးခြင်းနှင့်ရေဘူးသည်အနည်းငယ်ပိုကြီးစေလိုသည်နှင့်ရေပူအတွက်ညှိရန်လွယ်ကူသည်။ အဆိုပါဆွဲချကိုလည်းအလွန်လွယ်ကူစွာပြန်တတ်၏။ ကိုယ်တိုင်၎င်းကိုပြန်တွန်းရန်မလိုအပ်ပါ။ အပြီးသတ်သည်ကြီးလှ၏၊ မီးဖိုချောင်ကိုလက်စသတ်သောအခါ updated pics များအတွက်ညှိနေပါ။
R ကို *** y က2020 / 10 / 13
ငါချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ဤ faucet ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုချစ်! ဒါဟာတပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူခဲ့ပါတယ်, ငါသာ faucet ဟောင်းကိုဖယ်ရှားတစ်ချိန်က5မိနစ်ခန့်ယူခဲ့ပါတယ်။ တပ်ဆင်ရန်အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းမှာယခင်တပ်ဆင်ခြင်းကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။ လမ်းညွှန်တွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိတယ်။ ငါကခြေလှမ်းတိုင်းကိုသရုပ်ဖော်တယ်။ ငါ့မီးဖိုချောင်ချက်ချင်းအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ပြီးဒီဝယ်ယူမှုနှင့်အတူအလွန်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်! ဒါဟာအရမ်းတတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်, အရည်အသွေးဖြစ်ဟန်ငါ Matte finish ကိုချစ်။ သတိပြုပါ၊ လက်ဗွေများကိုပိုမိုမြင်နိုင်သော်လည်းအလွယ်တကူသုတ်နိုင်သည်။ ထုပ်ပိုးပြီးကောင်းမွန်စွာထုပ်ပိုးထားသည်။ ဒီထုတ်ကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှပြောစရာမလိုတော့ဘူး၊ တခြားသူတွေကိုကျွန်တော်အကြံပေးပြီးနှစ် ဦး စလုံးဝယ်လိုက်တယ်။ ငါပုံတစ်ပုံတင်ချင်တယ်ဒါပေမယ့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အတူခွင့်ပြုမထားဘူးပုံရသည်။ အရမ်းဆိုးတာပဲ။
တစ်ခုတည်းသောမိန်းမဖြစ်ခြင်း, ဒီရရှိသွားတဲ့သကဲ့သို့လွယ်ကူသောဖြစ်ခဲ့သည်။ လိမ်ဖဲ့ခြင်း မှလွဲ၍ မည်သည့်ကိရိယာမှမလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်ရေလိုင်းအတွက်မူလီကိုတင်းကျပ်ရန်ဖြစ်သည်။
တစ်ဦးက *** ဌ2020 / 10 / 15
နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့မီးဖိုချောင် faucet ထွက်ပြောင်းလဲသွားတယ်။ အတော်လေးအချိန်အတန်ကြာရှာဖွေနေနှင့်ဤအလှတရားကိုမြင်လျှင်ခဲ့သည်။ စျေးနိမ့်ကကျွန်တော့်ကိုတွန့်ဆုတ်စေခဲ့ပေမယ့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတွေက ၀ ယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပိုခိုင်မာစေခဲ့တယ်။ ထိုအခါပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှန်ကန်သောဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ faucet ကျွန်တော်တို့ရဲ့မီးဖိုချောင်မှလှပသောပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပြီးကောင်းတဲ့အင်္ဂါရပ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏။ ဆွဲချသောရေမှုန်ရေမွှားနှင့်ရေဖျန်းနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုနှစ်သက်သည်။ တပ်ဆင်မှုသည်အတော်အတန်လွယ်ကူပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင်ပြissuesနာမရှိပါ။ faucet အဟောင်းကိုဖယ်ရှားပြီးအသစ်တပ်ရန်လူနှစ် ဦး ကိုတကယ်လိုအပ်သည်။ install ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ အဆိုပါ faucet ကောင်းမွန်စွာ boxed လာ။ အားလုံးအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။ ဒါဟာအလွန်ကောင်းတဲ့ဝယ်ပါ! ၅ နှစ်အာမခံနှင့်မမှားပါ ပုံနှင့်မတိုင်မီ pics ကိုကြည့်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောလှပသောခြားနားချက် !!!!
တစ်ဦးက *** ဋ2020 / 10 / 18
ငါသတ္တုတွင်းအခြေစိုက်စခန်းမှာယိုစိမ့်လာသောအခါငါသစ်တစ်ခု faucet များအတွက်စျေးကွက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါလွပ်စ်နှင့်အိမ်သိုလှောင်ရုံနှစ်ခုလုံးကိုလည်ပတ်ခဲ့ရာ၎င်းသည်အချိန်ဖြုန်းတီးကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်စျေးနှုန်းကဘာလဲ၊ အကွာအဝေးအတွင်းရှိသူများသည်ကျွန်ုပ်အစားထိုးခဲ့သောစျေးနှင့်တူသောစျေးပေါသော Chromed Plated junk faucets များနှင့်တူကြောင်းခံစားခဲ့ရသည်။ ငါ Amazon အပေါ်ကြယ်ငါးပွင့်သုံးသပ်ချက်အားလုံးမှသတိထားခဲ့သော်လည်းရိုးသားသည့်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများနှင့်တူသောခံစားမှုပေါ် အခြေခံ၍ ခလုတ်ကိုဆွဲယူရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်စရာအလုံအလောက်, faucet စစ်ဆေးခြင်းအပေါ်ငါငါမှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုလုပ်သိတယ်။
Functional မှာငါရှာမယ့်အရာအားလုံးအစားထိုး faucet ရှိတယ်။ ၎င်းသည်အရောင်အနက်ရောင်ဖြစ်ပုံမည်သို့မည်ပုံသေချာသည်ကိုမသိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ငွေနစ်မြုပ်ရာတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သည်ဟုဆိုရလောက်အောင်ကျေနပ်မိသည်။ အဆိုပါ faucet နှင့်အတူပါလာသောဆက်စပ်ပစ္စည်းအားလုံးအရည်အသွေးကိုခံစားရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ရေပိုက်သမားမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဤရေပိုက်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တွင်ပြproblemနာမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်၏ဝယ်ယူမှုကိုအလွန်နှစ်သက်ပြီးမည်သူ့ကိုမဆိုအလွန်အမင်းထောက်ခံလိမ့်မည်။
ကို C ***, G2020 / 10 / 21
ငါဒီ faucet ကိုလွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ခန့်ကထည့်သွင်းခဲ့ပြီးပြproblemsနာမရှိပါဘူး။ ကြည့်ကောင်းတယ် တပ်ဆင်အလွန်လွယ်ကူသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အစားထိုးမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသဟောင်းထက်ရေစီးဆင်းမှုပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ အရည်အသွေးကောင်းဟန်ရှိသည်။ ၎င်းသည်သင်မှုတ်ဆေးကိုလွယ်လွယ်ကူကူထောင့်ဖြတ်နိုင်အောင်လေမှုတ်စက်၏ညာဘက်တွင်လှည့်လည်ထားသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အထူမြှုပ်ပေါ်တွင်ကောင်းစွာထုပ်ပိုးလာခဲ့သည်။ အထူးအကြံပြုလိုပါတယ်
*** *** f2020 / 10 / 26
ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေး၊ လှပသော finish၊ တပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ဤကလေးငယ်တွင်အတွေးအခေါ်နှင့်အင်ဂျင်နီယာများစွာ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။ အထူးအကြံပြုလိုတယ်! အလွန်စတိုင်ခေတ်သစ်ရှာဖွေနေ။ သငျသညျကိုမှုတ်ဖြုတ်ချသည့်အခါစုပ်အောက်မှာပိုက်ရိုက်သည့်မှုတ်ချိန်အလေးချိန်ကိုတွေ့ကြုံခံစားသူမည်သူမဆိုအတွက် ... ခိုင်မာတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုစာရွက်ရ ... ငါပလပ်စတစ်အမျိုးအစား placemat ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် .. ကပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရေပိုက်ကွင်းဆက်ပတ်ပတ်လည်ထိထိရောက်ရောက်မဟုတ်ပတ်ရစ်နှင့်တစ်ကန်တော့ချွန်ကဲ့သို့ပိတ်ပစ် ပုံသဏ္,ာန်ကျတော့ငါ့သားဟောင်းကျောင်းကပစ္စည်းတွေထဲကအပေါက်တစ်ပေါက်ကိုသုံးပြီး ၁ လက်မအကွာအဝေးရှိတဲ့အပေါက်နှစ်ခုကိုလုပ်တယ်။ လည်စည်းချုပ်ပြီးဖျာကိုချိတ်လိုက်တယ်။ ကုန်းပေါ်ကအပေါက် ၂ ခုကိုလုပ်တယ်။ ဒါမှငါဖျာကိုရေနုတ်မြောင်းအထိရောက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်။ ပိုက်နှင့် whalaa, အလေးချိန်ရုံ placemat လက် / ကန်တော့ချွန်အတွင်းပိုင်းတက်လျှော ... ယိုစီးမှုပိုက်ဆန့်ကျင်အလေးချိန်ကိုနှိပ် ... ကြီးမြတ်အလုပ်လုပ်တယ် ... ထိုပြproblemနာကိုတစ် ဦး စျေးပေါထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်။ တနည်းကား, ဒီ faucet အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါတယ် ... သင်စိတ်ပျက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
f ***, f2020 / 10 / 28
ငါကငါ့အဟောင်းကိုဖဲ့သောအခါငါ faucet ကြားဖြတ် faucet အဖြစ်ကျနော်တို့ကဆြုံး၌ငါတို့မီးဖိုချောင်ပြုပြင်မွမ်းမံစတင်သောအခါအစားထိုးရန်မျှော်လင့်, ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ငါအရမ်းပျော်တယ်၊ ကျွန်မခင်ပွန်းကအလွယ်တကူထည့်သွင်းပြီးစျေးကြီးတယ်။ ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်သောရေမှုန်ရေမွှားများကိုဆွဲယူသောစနစ်သည်သင်၏စုပ်ယူမှုအောက်တွင်အဆီးအတားမရှိစေရန်လိုအပ်သည်သို့မဟုတ်သင်ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြissuesနာများရှိလိမ့်မည်။ သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရွေ့လျားနေတယ်ဆိုတာသေချာအောင်လုပ်ရင်ပြissuesနာမရှိဘူး၊ ပြီးပြည့်စုံတယ်။ ငါ့သားဟာပုံစံအသစ်တစ်ခုလုပ်နေတယ်။ ငါတို့ကိုကြိုက်တယ်။ ဒါနဲ့သူ့အတွက်တစ်ယောက်ဝယ်လိုက်တယ်။ ငါတို့ဘားနစ်မြုပ်မှုအတွက်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံသည့်အခါအခြားတစ်ခုကိုလည်းရလိမ့်မည်။ ကြိုက်တယ်!
မီတာ *** မီတာ2020 / 11 / 12
Box ကြီးများကို faucet တစ်ခုအတွက်စစ်ဆေးပြီးကျွန်ုပ်သည် faucet အတွက်အလွန်အမင်းများသောပမာဏကိုမပေးလိုကြောင်းသဘောပေါက်ပြီးနောက်၎င်းကိုဝယ်ယူခဲ့သည်။ ဒီပစ္စည်းရောက်လာတဲ့အခါငါအရမ်းသဘောကျသွားတယ်။ ဒါဟာမြင့်မားသောအမှတ်တံဆိပ် faucets ဆင်တူထုပ်ပိုး၌ရှိ၏။ ဒါဟာအစိုင်အခဲ, ကောင်းစွာလုပ်။ ငါကြည့်ရတာတကယ်ကိုကြိုက်တယ်၊ အဲဒါကိုသုံးဖို့အရမ်းလွယ်တယ်။ ဒါဟာတော်တော်လေးအေးမြ features တွေရှိပါတယ်; မှုန်ရေမွှားများနှင့်မျိုးစုံမှုန်ရေမွှားအမျိုးအစားရွေးချယ်စရာများအတွက် on နှင့် off ခလုတ်ကို။ အဆင့်မြင့်ခံစားမှုနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောရှာဖွေနေသည့် faucet ကိုအစားထိုးလိုသူမည်သူမဆိုအားဤအချက်ကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုလိုပါသည်။ တပ်ဆင်မှုမြန်ဆန်အလွန်လွယ်ကူခဲ့ပါတယ်။
အိမ်မ ၀ င်ခင်အိမ်အသစ်ကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနှင့်ပထမဆုံးအလုပ်အကိုင်တစ်ခုမှာမီးဖိုချောင်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုနှင့်ကောင်တာဖြစ်သည်။ သေတ္တာကြီးတွေကသူတို့ပစ္စည်းတွေရဲ့အလွန်မြင့်မားတဲ့စျေးနှုန်းနဲ့ငါ့ကိုကြောက်လန့်နေတယ်။ ကျွန်ုပ်၏သေတ္တာကြီးစတိုးဆိုင်သို့ပြန်သွားသောကျွန်ုပ်၏ခရီးကိုစတင်ကြည့်ရှုခြင်း - Amazon နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစျေးနှုန်းရွေးချယ်မှုများစွာကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီ faucet တကယ်ကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်ထားတယ်။ Matte finish သည်ကောင်းမွန်ပြီးလက်ဗွေများမပြသပါ။ ဒါဟာမိုးသည်းထန်စွာဖြစ်ပြီးထို့ကြောင့်ရဲရင့်ခြင်းနှင့်ကြံ့ခိုင်ခံစားရသည်။ ၎င်းပေါ်ရှိတစ်ခုတည်းသောပလပ်စတစ်အပိုင်းအစသည်ရေပိုက်၏အဆုံးရှိ nozzle housing ဖြစ်သည်။ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်လိုအပ်သောဟာ့ဒ်ဝဲအားလုံးနှင့်အတူကြွလာ။ ကောင်တာထိပ်များတပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ရုပ်ပုံဖြင့်အသစ်ပြောင်းမည်။
J ကို *** ဎ2020 / 11 / 21
ဤထုတ်ကုန်သည်အလွန်ကောင်းသည်။ တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာငါတို့မီးဖိုချောင်မှာတပ်ဆင်လိုက်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကစပြီးငါတို့ရဲ့ဟောင်းနွမ်းသောရေပိုက်ကိုအစားထိုးလိုက်ဖို့လိုတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မီးဖိုချောင်ထဲကအများစုဟာ majorly ပုစုပ် မှလွဲ. updated ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့နစ်မြုပ်နေတဲ့နေရာကအရာအားလုံးကိုချိတ်ဆွဲဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်ဒါဟာနည်းနည်းပဲနည်းပညာပါ။ ဒါပေမယ့်အရာအားလုံးက faucet သူ့ဟာသူနဲ့အလွယ်တကူချိတ်ဆက်ပြီးသူကလုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာပဲ။ ပုံမှန်ရေစီးဆင်းမှုနှင့်မှုတ်ဆေးတစ်မျိုးအကြားလွယ်ကူစွာပြောင်းလဲနိုင်သောစွမ်းရည်ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မီးဖိုချောင်တွင် faucet သည်လှပနေပြီးအနက်ရောင်တန်ပြန်ထိပ်နှင့်အနက်ရောင်ကောင်တာတစ်ခုရှိသည်။ ဒါဟာperfectlyုံကိုက်ညီ!
*** ဃ d2020 / 11 / 29
ဤသည်ယခုအချိန်အထိဒီ faucet ကုန်ကျစရိတ်ကျိုးနပ်သည်။ စူပါဈေးကြီးသောမည်းနက်သော faucet ကိုရှာရန်ခက်ခဲသည်။ တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်။ ငါချည်ကိုက်ညီမခံခဲ့ရပေမယ့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသည်ကြီးနှင့်ငါ့ကိုအသစ်တစ်ခုကိုစလှေတျသောကွောငျ့, ငါအောက်မှာ screw နှစ်ခုသောအပိုင်းအစနှင့်အတူပြanနာတစ်ခုသို့ပြေး။ သူတို့ကအတူလုပ်ကိုင်ဖို့အကြီးဖြစ်ရပြီ။ တစ်ခုခုမှားယွင်းသွားရင်ဆက်ပြီးကူညီပေးလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။
သင်သာရေမှုန်ရေမွှား mode ကိုသွားနှင့်ရေကိုပိတ်ထားသည့်အခါကဒီ faucet နှင့်အတူငါသာ gripe, ဒါကြောင့်ပုံမှန် mode ကိုပြန် default မထားဘူး။ Ive သည်ရေကိုမပိတ်မီ၎င်းကိုပြန်လှန်လိုက်ခြင်းသည်ကမ္ဘာ၏အဆုံးမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်အချို့အတွက်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
K သည် *** ဃ2020 / 12 / 01
အလွန်ဒီမီးဖိုချောင် faucet ဝယ်ယူနှင့်အတူကျေးဇူးပြုပြီး။ ငါ့မီးဖိုချောင်ကိုအသစ်ပြန်ပြင်လိုက်တယ်၊ ဒီ faucet ကခေတ်သစ်မီးဖိုချောင်အတွက်အကောင်းဆုံး။ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဆွဲဆောင်မှုကိုနှစ်သက်သည်။ ဖြူစင်သောရေမှုန်ရေမွှားနှင့်အတူအနက်ရောင် matte အရောင်ဖြစ်ခြင်းထူးခြားတဲ့ faucet ။ အရည်အသွေး, နှင့်လက်ရာနှင့်အတူအထင်ကြီး။ ၎င်းသည်လိုက်နာရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီ၏အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များနှင့်ပံ့ပိုးမှုတို့ဖြင့်လာသည်။ စျေးနှုန်းအဘို့ကြီးသောတန်ဖိုး။
B က *** y က2020 / 12 / 13
ငါသည်ငါ့အနက်ရောင်ကျောက်စုပ်ကိုက်ညီရန်အနက်ရောင် Matt ၌ဤဝယ်ယူခဲ့သည်။ ကြည့်ကောင်းပါတယ် Function & အသွင်အပြင်5ကြယ်ပွ။ ငါပေးခဲ့ရသည့်အကြောင်းအရင်းလေးခုမှာရေမှုန်ရေမွှားအသုံးပြုသောအခါတိုင်းရေသည်နေရာတိုင်းသို့သွားသည်။ နေရာတိုင်း၌ကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ရေကိုသုတ်ပစ်လိုက်ပြီးနောက်အပြီးသတ်မှတဆင့်သံမဏိသေးသေးလေးအချို့ကိုပြသနေသည်။
J ကို *** ဂရမ်2020 / 12 / 21
ရိုးရှင်းသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့် faucet တို့သည်ကြီးသောအရည်အသွေးဖြစ်သည်။ ငါသတိထားရမှာက ဦး ခေါင်းကပလတ်စတစ်မဟုတ်၊ သတ္တုမဟုတ်ဘူး။ မျှော်လင့်တာကခရီးဝေးကိုချီလိမ့်မယ်။ ကောင်းကောင်းထုပ်ပိုးပြီး ၅- နှစ်အာမခံရှိသည်။ သေးငယ်တဲ့စျေးနှုန်း tag များအတွက်ခြုံငုံတန်ဖိုးကို!
: P *** y က2020 / 12 / 24
ငါ့ faucet အသစ်ကိုငါချစ်တယ်။ ဒါဟာဝေးယခုအကြီးအလုပ်ဖြစ်တယ် ၎င်းကိုစနစ်တကျတပ်ဆင်ရန်သေချာစေရန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရေပိုက်သမားတစ် ဦး ထည့်သွင်းခဲ့ရသည်။ မျှော်လင့်ပါတယ်ကအချိန်ကြာမြင့်စွာကြာရှည်ပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်ပေါက်ကြားခြင်းသို့မဟုတ်တုန်လှုပ်ခြင်းစတင်သည်ဆိုပါကတည်းဖြတ်လိမ့်မည်။
ဒေါ်2020 / 12 / 29
နီးပါးအပြည့်အဝစုဝေးရောက်လာကြ၏။ ရေဆက်သွယ်မှုကအရည်အသွေးကောင်းတယ်၊ faucet ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ပုံရတယ်။ ရော်ဘာကွင်းနဲ့တူတဲ့အပိုပစ္စည်းအိတ်လေးကိုငါသဘောကျတယ်။
S က *** r2021 / 01 / 02
ငါ၏အယခင်ပြန်လည်သုံးသပ် update လုပ်နေပါတယ်။ ၆ လထက်နည်းသော အချိန်မှစ၍ အနက်ရောင်ဆေးသုတ်ခြင်းသည်အောက်ခြေတွင်စတင်အစပြုခဲ့သည်။ သို့သော်ကုမ္ပဏီက faucet ကိုအာမခံချက်ဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ faucet ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်စတိုင်ကိုချစ်။
WOWOW Matte အနက်ရောင်မီးဖိုချောင်သုံးရောနှောပုတ်ပါ
WOWOW ခရုမ်းမီးဖိုချောင်မှ faucet ကို Pull-Out ဖြင့် ...